Uhlaka lokufaka umoya lusetshenziswa kujantshi omncane, imoto ephansi, isitimela esinejubane elikhulu, isitimela sezinhlamvu nethilamu.
Umthamo womkhiqizo -200pcs / ngonyaka, okhethekile kumakhasimende, ukuklama nokusiza ukuthuthukisa amakhasimende, sinikeze iMerak-Jin xin Air-Conditioning Systems (Wuxi) Co., Ltd;
Inzuzo yomkhiqizo: Isisindo esincane, isikhala esincane, isakhiwo esilula nesinengqondo, impilo ende yokusebenza, okungenani iminyaka engama-30
Umshini wefilimu we-KN95 owakhelwe ngaphakathi ekhaleni, obunjiwe futhi wasikwa ngokwehlukana, izingcezu eziyi-100 ngomzuzu.
Amakhabethe okudonswa (DFBK) asetshenziswa kujantshi omncane, imoto ephansi, isitimela esinejubane elikhulu, isitimela sezinhlamvu nethilamu. Amandla -500pcs / ngonyaka, akhethekile kumakhasimende. Sihlinzeke ngeFuji, kingway, skoda (eChina).
Isetshenziswe esitimeleni esincane, imoto ephansi, isitimela esinejubane elikhulu, isitimela sezinhlamvu nethilamu, umthamo wezembozo zokuphela ungaphezu kwezingcezu eziyinkulungwane minyaka yonke; esikhethekile kumakhasimende, sinikeze iBombardier (China ne-Europ), i-skoda (Czech), isitimela saseChina.
Isetshenziswe esitimeleni esilula, imoto ephansi, isitimela esinejubane elikhulu, isitimela sezinhlamvu nethilamu, umthamo wemiphini ungaphezu kwezingcezu eziyinkulungwane minyaka yonke; ekhethekile kumakhasimende. Sihlinzeke ngeBombardier (China & Europ), skoda (Czech), China isitimela.
Kulula ukuyisebenzisa, akukho nkinga yokuhlanza, akukho nkinga yokugcina isitho sekhofi, ukukhiqizwa kwekhofi okuzinzile (i-Novice nayo ingenza ikhofi ephelele), isikhathi esifushane sokulinda, intengo engcono kakhulu